Umkhankaso wokuhlonza nokuhlolela igciwane leCOVID-19 uqale kahle - Amajuba District Municipality
Umkhankaso wokuhlonza nokuhlolela igciwane leCOVID-19 uqale kahle
Emva kokumemezela kuMnyango wezeMpilo kuzwelonke ukuthi kuzoqalwa uhlelo lokuhlonza nokuhlolelwa igciwane iCOVID-19 emakhaya, lolu hlelo luqale ngegiya eliphezulu eSifundeni Amajuba.
Lolu hlelo lungenye yezindlela ezibalulekile okuhloswe ngalo ukulwisana nokubhebhetheka kwaleli gciwane. Ukuhlolwa kwabantu abaningi kuzolekelela ukunika isithombe ukuthi bangakanani abatheleleke ngaleli gciwane, bangakanani abadinga usizo lwezempilo oluphuthumayo luphinde luqikelele ukuthi labo asebethelelekile abadlulisi leli gciwane kwabanye abantu.
UNdunankulu waKwaZulu-Natal uMnumzane ethula lolu hlelo eMgungundlovu ushayele ihlombe abasebenzi bezempilo abalalele ikhwela likaMongameli lokuthi kungenwe yonke imizi kuhlonzwe kuphinde kuhlolwe okungenzeka banaleli gciwane. Uqinisekise ukuthi enye indlela yokutshengisa laba basebenzi ukuthi umsebenzi wabo ubalulekile uHulumeni uzokwenza isiqiniseko sokuthi banazo zonke izinsiza kusebenza ukuze baqhube lolu hlelo ngokungaphazamiseki.
Ukubhebhetheka kwaleli gciwane eSifundazweni iKwaZulu-Natal kubeka izimpilo zabantu abaningi engcupheni. Yingakho kubalulekile ukuthi sishintshe ukwenza \_.
Nangaphansi koMkhandlu weSifunda Amajuba abasebenzi bezempilo basukume babhukula baqala lo mkhankaso ezindaweni ezahlukene. U-Mayor woMkhandlu uDkt Musa Ngubane naye azange asalele emuva kepha uluqale kanye nalaba basebenzi lolu hlelo la akabonakale naye engena umuzi nomuzi enxenxa izakhamuzi ukuthi zimukele izisebenzi zezempilo zenze umsebenzi wazo ohambisana nokuhlonza nokuhlolelwa leli gciwane.
Bakhona abantu abambalwa ebebebukeka bethukile bengaqondi kahle ukuthi lolu hlelo lumayelana nani nokuthi luzoqhutshwa kanjani. UDkt Ngubane udlale iqhaza elibalulekile echaza ngalolu hlelo. “Akukhona ukuthi wonke umuntu uzohlolelwa leli gciwane. Kunemibuzo emibalwa obuzwa yona okuyiyona ekhomba ukuthi kumele uhlolwe noma cha. Isibonelo, uyabuzwa ukuthi uke waya yini emazweni angaphandle ahaqwe kakhulu ileli gciwane, ukube waya emadolobheni amakhulu eNingizimu Africa ahamba phambili ngezibalo zabahaqwe ileli gciwane, uke waxhuman nohaqwe ileli gciwane, njalonjalo. Uma izimpendulo zakho zikhomba ukuthi kumele uhlolwe, asichithi sikhathi kodwa sikuthumela kochwepheshe esihamba nabo ukuthi bakuhlole. Imiphumela yakho ibe isiphuma emahoreni angama-24”, kubeka uDkt Ngubane.
Ukuvikela ukuthi izinswelaboya zingasebenzisi leli thuba ukungena emizini yabantu zigile imikhuba yobugebengu abasebenzi bazobonakala ngemifaniswano kuphinde kumenyezelwe uma beza endaweni ethize ukuze umphakathi ubalindele.
Uma kwenzekutholakala ukuthi asikho isidingo sokuthi uhlolwe kuyacelakala ukuthi uqhubeke uhlanze izandla ngensipho nangamanzi, uma ukhwehlela noma uthimulela uvale umlomo namakhala ngendwangu noma nge-tissue, ungajwayeli ukuzithinta umlomo, amakhala namehlo ikakhulukazi ngezandla ezingageziwe, yima noma uhlale ngokuqhelelana nomuntu oseduze kwakho ikakhulukazi ezindaweni zomphakathi, hlala ekhaya.